के हुन्छ बेलाबेलामा वीर्य नफाल्दा ? यस्तो छ डाक्टरको ड’रलाग्दो भनाइ ! – Jagaran Nepal
स’र्पको टोकाईबाट एक बालकको मृ’त्यु !
काठमाडौँ। दाङको देउखुरीमा स’र्पको टो’काईबाट एक बालकको मृ’त्यु भएको छ । राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर ७ निवासी ७ वर्षीय बालक राजन चौधरीलाई स’र्पले ड’स्दा मृ’त्यु भएको राप्ती गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा ७ नम्बर वडा अध्यक्ष विद्याशरण चौधरीले जानकारी दिएका छन् । कुलोमा माछा मा’र्न गएका बेला ती बालकलाई बि’षालु ड’सेको थियो ।
स’र्पको टो’काईबाट बि’रामी परेको ती बालकलाई लमही अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि संर्प दंश उपचार केन्द्र गोरूसिंह लगिएको थियो ।त्यहाँ उपचार सम्भव नभए पछि बालकलाई नेपालगन्ज लैजाँदै गर्दा बाटोमै नि’धन भएको हो ।